Obodo 20 mara mma na Galicia I | Akụkọ Njem
Obodo 20 mara mma na Galicia I
Susana Garcia | | General, Ihe ị ga-ahụ, njem
Galicia bụ otu n’ime ala ndị ahụ ị hụrụ n’anya, ma a mụrụ gị n’ime ya ma ọ bụ na ị mụghị. Otu ebe na-abụghị otu n'ime mgbasa ozi kachasị, mana na agbanyeghị, yana ezi uche ya, jisiri ike nweta ọnọdụ na ebe kachasị mma na Spain maka ọtụtụ ihe. Maka ndị ya, ụsọ mmiri ya, ọdịdị ala ya na n'ezie maka gastronomy ya. May nwere ike ịga ezumike ma kwaga n'obodo ndị isi na-amaghị na ị tufuru nnukwu ihe: obodo ya ndị mara mma.
Taa, anyị ga-enye gị nhọrọ mbụ nke Obodo 20 mara mma na Galicia, anyị ga-adakwa. Ha niile nwere ihe pụrụ iche, ihe ha ga-agafe ma nọrọ ntakịrị iji chọpụta ihe mere ha ji pụọ iche. Yabụ nwee ike depụta obodo nke ị ga-agarịrị ma ị laghachi ebe ahụ.
3 Alriz, Ourense
9 Bayona, Pontevedra
Anyị na-amalite site n'otu n'ime obodo ndị ahụ n'agbanyeghị na ha pere mpe nwere ọtụtụ ndị njem na-abịa. Ọ bụ Combarro, nke dị na Rías Baixas, ebe a na-enwe ekele maka osimiri na gastronomy ya. Na Combarro, anyị ga-ahụ obodo nta ịkụ azụ nwere ụdị ezigbo foto na anyị ga-anọ ụbọchị niile na-ese foto. Na obere ụgbọ mmiri, ụlọ okwute, warara n'okporo ámá na ụlọ oriri na ọ servingụ servingụ na-enye nri mmiri bụ kpochapụwo. Na mgbakwunye na nke a, ị ga-ahụ obodo a maka granaries mara mma nke na-eleghara olulu mmiri na maka obe obe.
Ribadavia bụ otu n'ime obodo ndị ahụ ka na-ejigidekwa amara ochie ya. Otu n'ime nleta dị mkpa bụ Lelọ nke Sarmiento. Ọ bụrụ n ’ị bịarute n’oge ọkọchị, ị nwere ike ịnụ ụtọ Festa da Istoria, yana obodo nwere uwe dịka nke ochie, ma ọ bụrụ n’abụghị, mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ mmanya na octopus tapa.
Allariz bụ otu n'ime obodo ndị ahụ lebara anya ka ha ghara idakwa amara niile na mpaghara ochie ya, yabụ echekwara ya nke ọma. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ a obodo ochie echekwara nke ọma jiri amara, anyị ga-aga obere obodo a dị na Ourense. Chọọ maka ofka Santiago de Allariz, otu n'ime isi ihe na-atọ ụtọ ya, ma gbalịa tufuo onwe gị nwayọ site n'okporo ámá ya dị n'okirikiri, nke a na-ekwu na e mebere ya na foduru ụlọ ochie ahụ na-adịkwaghị.
Na Rías Baixas enwere ọtụtụ akụkụ na-adọrọ mmasị, ọ bụghị n'efu ọ bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta. Anyị na-ahụ obodo Cambados, ama ama n'ihi etu esi amara mmanya Albariño ya. Na mgbakwunye na ịkwụsị nụrụ ụtọ ndị a ma ama mmanya ke kiet ke otu ya wineries, anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe ndị dị ka foduru nke Santa Maria de Dozo, na etiti obodo ahụ, nkume mara mma Pazo de Fefiñáns na Torre de San Sadurniño.
Ekwuru na onye ọ bụla anaghị aga San Andrés de Teixido dị ka onye nwụrụ anwụ na-aga ndụ, yabụ anyị ga-agafe ebe a n'oge na-adịghị anya, na n'ezie njem ahụ kwesịrị ya. Obere obodo nta ma nwee echiche dị egwu na ugwu. Ga ebe nsọ ya dị mkpa, ma na-enwekwa obi ụtọ n'oké osimiri ozugbo ị rutere ebe a dị egwu nke njem uka. Maka na uzọ ọzọ, cheta na ị ga-enwerịrị mmụọ mgbe ị na-ahapụ ụwa a.
O Cebreiro bụ obodo dị na Lugo ma ama ama maka ịgbake ahụkarị pallozas, ụfọdụ ụlọ nna ochie na-adabaghị na ya. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ụzọ ịlaghachi n'oge iji chọpụta otu ndị mmadụ si biri n'oge na-adịghị anya na mpaghara a nke ugwu Lugo. Anyị agaghị akwụsị ịbịaru Serra do Caurel na ọwa mmiri Sil mgbe anyị nwesịrị akụkọ ihe mere eme nke pallozas dị ịtụnanya nke O Cebreiro.
Oritgueira bụ obodo n'ụsọ osimiri osimiri wee bụrụ onye ama ama maka ya ndaeyo ndaeyo nke egwu celtic. N'ebe di nso anyi nwere ike ichota oke osimiri na ebe ama ama ama ama nke kachasi nma n'uwa, n'ugwu Loiba. Nleta obodo a nwere ọdụ ụgbọ mmiri na gburugburu ala gburugburu bụ otu n'ime ụzọ mara mma anyị nwere ike ime.
Monforte de Lemos pụtara ihe niile maka ịbụ ebe dị mkpa n'oge ochie, obodo ewusiri ike nke echekwara ọtụtụ ụlọ. A villa ị pụrụ ịnụ ụtọ ya ama nnukwu ụlọ na Torre del Homenaje, ya kasị mkpa ebe, na Count Palace ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk nke Benedictine. Nwere ike ịga leta ndị ọzọ akụkọ ihe mere eme na a mara mma obodo nke Lugo, dị ka Old Bridge, nke a na-ekwu nwere Roman si. O doro anya na amara ya bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Anyị gụchara obodo mbụ a na obodo Baiona, nke dị na ndịda Galicia. Ọ bụ obodo dị jụụ n'ụsọ oké osimiri, na-elele Cíes Islands a ma ama. N'ezie, n'obodo a, ịnwere ike iburu ụgbọ gaa leta ha. Ma mbụ anyị ga-enwe mara mma osimiri na Ebe e wusiri ike nke Monterreal. Anyị ga-ahụkwa oyiri nke caravel de la Pinta n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Baiona.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Obodo 20 mara mma na Galicia I
7 Iche omenala Omenala maka ndị njem
London dị ka di na nwunye